प्रदेश १ मा संक्रमितलाई पहिलोपल्ट प्लाज्मा थेरापीबाट उपचार – Health Post Nepal
प्रदेश १ मा संक्रमितलाई पहिलोपल्ट प्लाज्मा थेरापीबाट उपचार
२०७७ भदौ २ गते १६:२३
प्रदेश १ मा कोरोना भाइरसका संक्रमितलाई पहिलो पटक प्लाज्मा थेरापी विधिबाट उपचार गरिएको छ।
धरानस्थित बिपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान सोमबार राति प्लाज्मा थेरापी विधिबाट उपचार थालिएको छ। ती संक्रमितको स्वास्थ्यमा सुधार भइरहेको चिकित्सकहरूले जानकारी दिएका छन्।
यसअघि काठमाडौंको शिक्षण अस्पतालमा पहिलो पटक यो विधिबाट वरिष्ठ चिकित्सक डा. ज्ञानेन्द्रमान सिंह कार्कीलाई उपचार गरिएको थियो।
सरकारले मुलुकभरका १२ स्वास्थ्य संस्थालाई प्लाज्मा थेरापी विधिबाट उपचार गर्ने अनुमति दिइसकेको र सोही विधिअनुसार उपचार गरिएको प्रतिष्ठानका डा. सन्जिव शर्माले जानकारी दिए।
उनका अनुसार सोमबार मोरङ सुन्दरहरैंचा नगरपालिकाका २५ वर्षीय युवाले प्लाज्मा दान गरेका थिए।
मोरङको गोठगाउँ आइसोलेसनबाट कोरोनामुुक्त भएका ती युुवाले बिपीमा आफ्नो रक्तसमूह मिल्ने संक्रमितको स्वास्थ्य अवस्था नाजुक रहेको र प्लाज्मा आवश्यक भएको सूचना पाएपछि आफैं अस्पताल पुुगेका थिए।
चिकित्सकका अनुसार कोरोना संक्रमणपछि निको भएका व्यक्तिको प्लाज्मा अरु संक्रमितका लागि औषधी जस्तै हुन्छ। प्लाज्मामा भएको एन्टिबडीले भाइरस मार्ने क्षमता हुन्छ।
प्रदेश १ मा एकै दिन १ सय ३९ संक्रमित थपिए
प्रदेश १ मा एकैदिन १ सय ३९ जना कोरोना संक्रमित थपिएका छन्। तीमध्ये मोरङमा सबैभन्दा बढी १ सय ५ जना रहेका छन्।
झापामा २०, सुनसरीमा ६, संखुवासभामा ३, उदयपुरमा २, पाँचथर र प्रदेश १ बाहिरका २ जना रहेको सामाजिक विकास मन्त्रालयले जनाएको छ।
संक्रमण देखिएकामध्ये ४२ महिला र ९७ जना पुरुष छन्।
मन्त्रालयका अनुसार मोरङको विराटनगरमा ९६ जना संक्रमित भएका छन्। जसमा ३१ महिला र ६५ पुरुष छन्। बूढीगंगामा २ महिला र ३ पुरुष, सुन्दरहरैचामा १ महिला र १ पुरुष, ग्रामथान र पथरी शनिश्चरेमा १–१ पुरुषको रिपोर्ट पोजेटिभ आएको छ।
झापाको दमकमा ७ पुरुष, भद्रपुरमा १ महिला र ५ पुरुष, झापा गाउँपालिकामा २ पुरुष, कन्काईमा १ महिला र झापाको स्थानीय तह नखुलेका ४ जना पुरुष छन्।
सुनसरीको इटहरीमा १ महिला र २ पुरुषमा संक्रमण देखिएको छ भने धरानमा २ महिला र १ पुरुषमा संक्रमण पुष्टि भएको छ। संखुवासभाको सभापोखरीका ३ पुरुषको रिपोर्ट पोजेटिभ आएको सामाजिक विकास मन्त्रालयले जनाएको छ।
मन्त्रालयका अनुसार उदयपुरको बेलका र त्रियुगामा १–१ पुरुष, पाँचथरको कुम्मायकमा १ महिला र धनुषाका १ महिला र महोत्तरीका १ महिलामा संक्रमण देखिएको छ। प्रदेश १ मा कोरोना संक्रमितको संख्या २ हजार २ सय ३२ पुगेको छ।
प्रदेश १ बाट आज ३४ जना डिस्चार्ज भएका छन्। कोशी अस्पताल कोभिड–१९ उपचार केन्द्र विराटनगरबाट १६ र बिपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान धरानबाट १८ जना डिस्चार्ज भएका छन्।
डिस्चार्ज हुनेमा मोरङका २०, सुनसरीका १२ र झापाका २ जना छन्। प्रदेश १ मा डिस्चार्ज हुनेको संख्या १ हजार १ सय ३३ पुगेको छ।
प्रदेश १ मा आज २ हजार ६ सय ३१ जनाको पिसिआर परीक्षण गरिएको छ। हालसम्म ७० हजार १ सय २ जनाको पिसिआर परीक्षण भएको सामाजिक विकास मन्त्रालयका कोभिड तथ्यांक संकलन समितिका संयोजक डाक्टर सरोज विशालले जानकारी दिए।